Izindatshana zikaScott Hardigree ku Martech Zone |
Imibhalo nge UScott Hardigree
Enye yezinzuzo zokuphila nokuphefumula imboni ye-niche, njengokusebenzisa i-ejensi ye-imeyili, ukuthi inika umuntu ithuba lokucabanga ukuthi ikusasa lingabanjani. Okulandelayo ngumbono wesikhathi esizayo wokuthi ukumaketha kwe-imeyili kuzobukeka kanjani ngonyaka we-2017 kubasebenzi, abathengisi kanye nabathengi ngokufanayo. Igama Lomdlalo Lishintshile Laya phambili eminyakeni eyisithupha futhi igama elithi “ukumaketha nge-imeyili” selinyamalele kulimi lwethu lomdabu ngokuphelele. Noma iphansi
Okwabathengisi abafuna ukumba igolide eliningi ezinhlelweni zabo ze-imeyili; ukumakethwa kwe-imeyili okuthengiswayo kuthola ukuthandwa ngokushesha. Bafuna izinsizakalo zokumaketha ezilawulwayo ze-imeyili ngoba bakhungathekile futhi bayonga. Ngabe ukukhipha ukukhangisa kwakho nge-imeyili kwenza amadola nomqondo kuwe?
Ababonisi be-imeyili bezentengiso ngokuvamile bathatha izinhlobo ezintathu; konke lokhu kunamakhono nesipiliyoni okukhethekile ekwakheni amasu wokuthengisa we-imeyili asebenzayo. Noma kunjalo, amakhono abo ayisisekelo neminikelo yehluka kakhulu. Ngakho-ke udinga umxhumanisi we-imeyili? Uma kunjalo, hlobo luni? Zibuze le mibuzo elandelayo.